Ikwesiri itinye ego na nleba anya na ntaneti iji jikwaa aha gi? | Martech Zone
Amazon, Ndepụta Angie, Trustpilot, Kpugheere, Yelp, Google My Business, Yahoo! Ndepụta mpaghara, Choice, G2 Ìgwè mmadụ, Ntụkwasị obi, Nnwale, Nke?, Ahịa Salesforce, Glassdoor, Atụmatụ Facebook & Nyocha, Twitter, na ọbụla weebụsaịtị nke gị bụ ebe niile iji weghara ma bipụta nyocha. Ma ị B2C ma ọ bụ B2B ụlọ ọrụ… Ohere inweta bụ na enwere onye na-ede banyere gị n'ịntanetị. Na nyocha ndị ahụ dị n'ịntanetị nwere mmetụta.
Kedu ihe bụ Nlekọta Aha?
Nlekọta aha ọma bụ usoro nlekota na ijikwa aha nke mmadụ ma ọ bụ azụmaahịa na ntanetị. Na mbụ okwu mmekọrịta ọha na eze, ọganihu nke nsonaazụ ọchụchọ, mgbasa ozi mmekọrịta, na saịtị nyocha ọha na eze emeela ka njikwa aha dị oke mkpa na mbọ ahịa na ụlọ ahịa nke ụlọ ọrụ.
Ọrụ nlekota aha ọma na-eme ka ụlọ ọrụ mara oge ọ bụla ozugbo a na-edebanye nyocha na-adịghị mma n'ịntanetị. Ọ bụrụ na a dọrọ ya nke ọma wee nabata ya, ụlọ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ iji dozie esemokwu ahụ tupu ọ kesaa ma ọ ga-emebi karịa. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ nwere ike irite uru site na idozi esemokwu ka ndị ahịa wee nwee ike ịhụ nzaghachi ziri ezi nke nad ụlọ ọrụ chọrọ ịnye ndị ahịa ya.
Key Statistics na Nyocha Online
71% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwenye na nyocha ndị dị n'ịntanetị na-eme ka mkpebi ha zụrụ nke ọma.
83% nke ndị zaghachiri kwuru na ha ga-atụkwasị obi nyocha onye ọrụ na onye nkatọ.
70% nke ndị na-azụ ahịa na-enyocha nyocha ma ọ bụ ọkwa tupu ịzụta.
Nyocha ndị ahịa na-emepụta 74% mmụba na ntụgharị ngwaahịa.
Nyocha na-eme ka 18% dị elu na-eguzosi ike n'ihe na 21% afọ ojuju ịzụta dị elu.
Ọ bụghị ihe niile dị mma. A na-eme atụmatụ na 10-15% niile nyocha mgbasa ozi mmekọrịta ga-abụ nke adịgboroja. Ntụle adịgboroja emeela ka ndị gọọmentị na ndị na-ere ahịa n’ịntanetị mara. Amazon na-agba akwụkwọ ihe karịrị otu puku ihe adịgboroja ọrụ nyochaa ọrụ.
Ọ bụ n'ihi na ọdịmma kasịnụ nke Amazon. Adịgboroja reviews na Amazon anaghị emerụ ndị na-emepụta ngwaahịa ahụ, mana ha na-ewute akara Amazon ma na-efu ya ego ebe ọ bụ na afọ ojuju ndị ahịa nwere ike ibute nloghachi dị elu. Usoro ojiji nke Amazon machibidoro nyocha adịgboroja, yana ọ na-agba akwụkwọ maka mmebi nke nkwekọrịta yana imebi iwu nchebe ndị ahịa.
Ndị mmadụClaim.com na-enye ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa ohere ịdebanye nkwupụta ma kwupụta ya mgbe onye nnata azaghị ma ọ bụ chọọ idozi ọnọdụ ahụ. Enweghị ndị ọka iwu ma ọ bụ mgbasa ozi dị mkpa. Ha enyela ihe omuma a, Nyocha nke Nyocha.
Ya mere… azịza ya bụ nnọọ! Kwesịrị ị na-nlekota ndị gị, azụmahịa gị, na gị na ngwaahịa na aha nlekota nyiwe iji hụ na ị nwere ike zaghachi na ịnọgide na-enwe a oké aha online.
Tags: amazonNdepụta Angienyocha azụmahịaChoicenyocha ndị ahịaAtụmatụ Facebook & Nyochag2 igwe mmaduGlassdoorgoogle azụmahịa mNyocha banyere ntanetịna-ekwunjikwa ahanyochaa nyochaaNyochaire ere ahịaNnwalekpugheerentụkwasị obintụkwasị obiTwitterNke?Yahoo! Ndepụta mpagharaYelp